Realme X2 Pro, सुपर प्रमोशनमा सर्वश्रेष्ठ मूल्यमा Androidsis
Realme X2 Pro, सुपर प्रमोशनमा सबै भन्दा राम्रो मूल्यमा
हामी यो कुरामा पूर्ण निश्चिन्त छौं तपाईंले पहिले नै फोन फर्म रीयलमेको बारेमा सुन्नुभयो। अर्को उडान निर्माता सामान्य जनताको ध्यान खिच्नको लागि व्यवस्थित गरिएको छ सबैले खोजिरहेका छन् के प्रस्तुत गर्दै। राम्रो मूल्यमा शक्तिशाली र सुन्दर स्मार्टफोनहरू। केहि चीज जुन यो आधारभूत शीर्षक जस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ कि यो विशाल बहुमतको लागि सजिलो छैन।
Xiaomi को साथ बजारमा यसको आगमन तुलना गर्न अपरिहार्य छ। फर्मले ठूला निर्माताहरूको बीचमा नै पहिल्यै ग्रहण गरिसक्यो जुन स्मार्टफोनको विश्वमा आफ्नो यात्रा शुरू गर्‍यो धेरै त्यस्तै दर्शनको साथ। पछिल्लो Realme प्रमुख, X2 प्रो सबै निर्माताहरु को लागी खडा गर्न आएको छ कुनै जटिल बिना। र आज हामी तपाईं को लागी एक प्रस्ताव ल्याईन्छ कि तपाईं सम्झना छैन।
के तपाईं प्रस्ताव हेर्नको लागि अब बढी पर्खनु चाहानुहुन्न? राम्रो यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
1 सबैको बिरूद्ध Realme X2 प्रो
2 प्रस्ताव तपाईंले प्रतिक्षा गरिरहनु भएको थियो
सबैको बिरूद्ध Realme X2 प्रो
हामीलाई थाहा छ कि हालको स्मार्टफोन बजारमा एउटा खुट्टा पाउन कत्ति गाह्रो छ। त्यसैले जब नयाँ फर्म सफल हुन्छ, यो स्पष्ट छ कि यो संयोगले छैन। Realmeतपाईको भर्खरको उपकरणको साथ छत मार्फत बार सेट गरेको छ। यति धेरै कि यो अपमानजनक हुन सक्दछ Realme X2 प्रो लाई एक मिड-रेंजमा फिट गर्न मिल्छ जसमा यसले असीम अवर स्मार्टफोनको साथ "छिमेक" साझा गर्दछ।
बाट सुरू गर्दै शारीरिक पक्ष, जसको नतीजा आकर्षक तिनीहरूको लागि रेखा र अन्त्य। र पनि भवन निर्माण सामाग्री तिनीहरूले एक धेरै "शीर्ष" स्पर्श प्रदान गर्दछ। तपाईंको हातमा Realme X2 प्रोको साथ यसले देखाउँछ कि हामी कुनै पनि उपकरणको सामना गरिरहेका छैनौं। तर हामीलाई थाहा छ कि यो केवल सुन्दर फोन मात्र होइन।
यदि हामी उपस्थित हुन्छौं भने प्रदर्शन Realme X2 Pro प्रविधि चीज मात्र राम्रो हुन्छ। हामीले जस्तै प्रख्यात प्रोसेसर भेट्टायौं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 +. .6,55..XNUMX इन्च सुपर एमोलेड डिस्प्ले। मेमोरी १२ जीबी र्याम y GB 128 जीबी भण्डारण। ब्याट्री 4.000 mAh अल्ट्रा द्रुत चार्जको साथलाई र एक पराकाष्ठा को रूप मा क्वाड क्यामेरा M 64 Mpx + १ Max अधिकतम + M Mpx + चौडा कोणको साथ।
Realme X2 Pro को डेटा र फाइदाहरू जुन तपाईं अझ धेरै विस्तारमा जान्न सक्नुहुनेछ यो पूर्ण समीक्षा हाम्रो सहकर्मी मिगेल हर्नान्डेजले वर्षको अन्त्य हुनुभन्दा केही समय अघिको वा हाम्रो युट्यूब च्यानलमा यो भिडियोमा: Realme X2 Pro, विशाल किलर.
प्रस्ताव तपाईंले प्रतिक्षा गरिरहनु भएको थियो
यदि Realme X2 प्रो पहिले नै तपाईंको ध्यान समातिएको छ सामान्य छ। यो हामीले नयाँ उपकरणमा खोज्ने सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। र सामान्य अवस्थामा, यसको मूल्य पनि आकर्षक छ। अब धन्यवाद अभूतपूर्व पदोन्नति, तपाईं आफूले प्रतिक्षा गरिरहनु भएको स्मार्टफोन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्करणमा Realme X2 प्रो, १२ जीबी र्याम र १२12 जीबी भण्डारण "पहुँच भित्र छ। बुझ्नुहोस् यस लि from्कबाट अब उत्तम मूल्यमा.
जनवरी १ 13 देखि सुरू हुँदै, र अस्थायी रूपमा तपाईं Realme X2 प्रो को एक विशेष मूल्य मा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ 419,99 यूरो। प्रयोगकर्ताहरू र प्रतिस्पर्धाको ध्यान आकर्शित गर्न सक्ने मोबाइल मोबाइल तपाईले पाउन सक्नुहुने उत्तम मूल्यमा हुन सक्छ।
यहाँ तपाईं Realme X2 प्रो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यस उदार पदोन्नतिबाट लाभ उठाउँदै.
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » Realme X2 Pro, सुपर प्रमोशनमा सबै भन्दा राम्रो मूल्यमा
कस्तो विनाशकारी पोष्ट!
यो बेच्न राम्रो हुन्छ, बुद्धिमताका साथ होईन, तर सामान्य ज्ञानको साथ।
लिसारडो लाई जवाफ दिनुहोस्
ग्यालक्सी एस २० + (ग्यालक्सी एस ११) का पहिलो चित्रहरू फिल्टर गरिएका छन्
शाओमी मी ए2ले पहिले नै एन्ड्रोइड १० अपडेट प्राप्त गर्दैछ